सेण्ट्रल फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १७ मङ्सिर २०७५)
२०५४ वैशाख २ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कारोबारका लागि स्वीकृति पाएको सेण्ट्रल फाइनान्स कम्पनीले चालू आव २०७५÷७६ को पहिलो त्रैमासमा रू. ७३ लाख ५२ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २ सय ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २१ लाख ४० हजार नाफा कमाएको थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
सोही अवधिमा कम्पनीले चुक्तापूँजी रू. ८२ करोड ३३ लाख पु¥याएको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. १७ करोड ६९ लाख छुट्याएको छ । रिजर्भ कोषको रकम गत आवको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको मङ्सिर १ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले ८ दशमलव ७६ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको आगामी योजना स्रोत सङ्कलन र परिचालनको दायरा अझ फराकिलो बनाउन उपत्यकाबाहिर शाखा कार्यालय विस्तार गरी सेवा विस्तार गर्ने र कारोबारलाई आधुनिकीकरण गर्ने रहेको छ ।
2018-12-03 - 101 view(s) - abhiyan